Horudhac: Brighton & Hove Albion vs Manchester City… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ka dhacaya garoonka Amex) – Gool FM
(Brighton) 11 Luulyo 2020. Brighton & Hove Albion ayaa doonaysa inay iska ilaaliso guuldarrooyin xiriir ah oo soo gaara horyaalka Premier League, marka ay garoonkeeda Amex ku soo dhoweynayso Kooxda Manchester City.
Kooxda Seagulls ayaa garoonkeeda waxaa ku garaacday kooxda horyaalka ku guuleysatay ee Liverpool habeenkii Arbacada, waxaana ay haatan la ciyaarayaan kooxda Man City iyagoo raadinaya inay joojiyaan qaab ciyaareedkoodii liitay.
Tababaraha Brighton ee Graham Potter wuxuu haystaa koox buuxda oo taam ah oo uu ka soo xusho safkiisa, marka laga tago xiddiga dhaawaca mudada dheer ku maqnaa ee Jose Izquierdo, kaasoo ka soo kabanaya dhaawac jilibka ah.
Steven Alzate ayaan ciyaarin tan iyo intii dib loo bilaabay ciyaarta horyaalka, sababtoo ah dhibaato ayuu ka qabaa gumaarka, laakiin waxaa laga yaabaa inuu soo laabto safka.
Macallinka Kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayay u badan tahay inuu isku shaandheyn doono safkiisa, isla markaana uu isbedel ku sameeyo kooxdii garaacday Newcastle.
Sergio Aguero ayaa sii wadaya baxnaanintiisa, kaddib qalliin jilibka looga sameeyay, waana uu seegayaa kulankan.
>- Brighton ayaa laga badiyay dhammaan shantii kulan ee Premier League ay la ciyaareen kooxda Man City, waxaa laga dhaliyay 15 gool, iyagoo dhaliyeen kaliya labo gool.
>- Man City ayaa guuldarro la’aan ah unbeaten siddeedoodii kulan ee ugu dambeeyey oo ciyaaraha sare ee horyaalka ay la ciyaareen Brighton si isku xig-xiga tan iyo bishii October sanadkii 1981-kii.
>- Brighton ayaa badisay kaliya labo ka mid ah 14-kii kulan Premier League ee 2020, waana kooxda ugu yar horyaalka, inkastoo labadan guul ay yimaadeen tan iyo markii dib loo bilaabay horyaalka.
>- Kooxda Seagulls ayaa laga badiyay saddex ka mid ah afartii kulan ee ugu danbeeyay ee ay ku ciyaaraan garoonkooda, taasoo la mid ah 13-kii kulan ee ay ku ciyaareen Amex Stadium.
>- Brighton ayaa guuldarro la’aan ah dhammaan sagaalkii kulan ee horyaalka Premier League oo uu gool u dhaliyey Neal Maupay.
>- Manchester City ayaa laga badiyay saddexdii kulan ee ugu danbeeyay ee ay marti ahaayeen horyaalka Premier League – waxaa ugu dambeysay afar guuldarro oo isku xigta oo isku xigta ee bannaanka ku soo gaarta horyaalka intii u dhaxeysay bilihii March iyo April ee sanadkii 2015-kii.
>- Waa markii ugu horreysay ee Pep Guardiola uu khasaaro la kulmo saddex kulan oo ay marti ahaayeen horyaalka heerkiisa macallinnimo.
>- Man City ayaa dhalisay kaliya saddex gool lixdii kulan ee ugu danbeeyay oo ay marti ahaayeen, kulamadaas waxay tuuree 99 shuut oo 30 ka mid ah ay ahaayeen bartilmaameed toos ah.